नागरिक लगानी कोषको शेयर लिलामीमा - E-BreakingNews
Home Karobar नागरिक लगानी कोषको शेयर लिलामीमा
नागरिक लगानी कोषको शेयर लिलामीमा
e-Breaking News July 27, 2020 Karobar,
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर आज देखि बिक्रिमा आएको छ ।
उक्त शेयर खरीद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८०० मा नघट्ने गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र आवेदन फारम विक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड हात्तिसार, काठमाडौं र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडक, काठमाडौंमा पाउन गर्न र पेस गर्न सकिनेछ ।
शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १०० कित्ता वा सोभन्दा माथि १० ले भाग जाने गरि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यो संस्थापक शेयर साउन १९ गतेसम्म लिलामीमा विक्री खुला भएको हो ।
आवेदन फारम नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको सबै शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन प्राप्त गर्न र बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आज शेयर कारोबार भएको २ घण्टामा रू. ८३ करोड ६३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । सो अवधिमा नेप्से परिसुचक ५ दशमलव ८३ अंकले वृद्धि भएर १ हजार ४७० दशमलव ९३ विन्दुमा पुगेको हो ।
सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको रू. ८ करोड ६५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकका शेयरधनीले गुमाएका छन् । बैंकको शेयर मूल्य ९ दशमलव ५२ प्रतिशत घटेको छ । जोशी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । रासस
By e-Breaking News at July 27, 2020